Ukuziphatha kwiNethiwekhi yeNtanethi- Musa ukuba yiSNOB | Martech Zone
I-Etiquette yeNethiwekhi yeNtanethi-Musa ukuba yi-SNOB
NgoLwesine, Novemba 30, 2006 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Le rant sele isela okwethutyana kodwa ndiza kuqhubeka ndiyitsho, i-intanethi inexabiso elilinganayo lemingxunya ** njengelinye ilizwe. Hha… phew, nditshilo. Ndiziva ndibhetele.
Nantsi inyama yam yenkomo. Inethiwekhi yokuncokola yeyona nto ibalulekileyo ukubetha iwebhu ukusukela… hmmmm…. Kulungile, masithi yeyona nto ibalaseleyo yakha yangena kwiwebhu. Ndiyabuthanda ubuchule bokukwazi ukuvakalisa ukungavisisani kwam, izimvo kunye neenkcaso. Ndiyakuthanda ukuva izimvo zabanye abantu kunye neengcebiso ngokunjalo-nokuba andivumi.
Ngamanye amaxesha le web ibanzi kwihlabathi liphela ivakalelwa kukuba yeyona ndawo igqibeleleyo, encinci. Ndinabafundi abahlala betyelela ibhlog yam, kwaye kukho iqela leebhlog endikhule ndilithanda kakhulu kule minyaka imbalwa idlulileyo.
Oko kwathethi, kutheni umntu ethatha inxaxheba kolu luntu ukuba nje abe nentsingiselo? Yintoni le malunga nobomi babo ilusizi kangangokuba kufuneka bangene kwi-Intanethi kwaye baqhubeke nomzamo wokusasaza usizi lwabo kwabanye? Ngaba buhlungu ubomi bakho?
Iziganeko ezimbalwa zamva nje zenzekile ezafika kum. Okokugqibela kukuba enye yekhowudi yam yabonwa kwindawo yam kwaye yathathwa kuyo Reddit.com ngumntu ogama lingu 'gizmo'. Andazi gizmo, kodwa ndiyayixabisa ukuba ithathe ixesha kwaye ithumele ikhonkco.
Jonga amagqabantshintshi! IINKCUKACHA! Eyona nto ingcono xa enye yeziza zam zikwiPlanethi IAjaxian. Jonga la magqabantshintshi! Kulula ukwenzakalisa. Khange ndicele ukubeka phantsi. Ndinesixhobo esipholileyo, bendisebenzisa itekhnoloji epholileyo, kwaye ndiyibeka phaya ebantwini. Isimahla! Akukho mntu kufuneka aye kuyo, kwaye ukuba bayaya, akukho mfuneko yokuba bahlawule.
Eyona nto iphambili kukuba akukho sizathu sokuba ube yi-SNOB. Ukubonelela ngengcebiso, ingxelo, iingcebiso, inkxalabo, isikhombisi, ukugxeka okwakhayo… zonke ezi ndlela zamkelekile ngokwasentlalweni. Zonke ezo zinto zisinceda ukuba siguquke kwaye sibe ngcono kwinto esiyenzayo nakwinto esiyaziyo. Ukuba yi-SNOB akuncedi nto. Ayongezi ixabiso 'kwinethiwekhi yoluntu'.
Kulungile… ndonele. Yintoni i-SNOB? Ngexesha elizayo umntu ukhohlakele, engenantlonelo, okanye engazi nto ngokungacacanga kwindawo yokuNxibelelana nabantu, ungabathumela umzobo ngasekunene! Zive ukhululekile ukusebenzisa nayiphi na le mizobo naphina kwaye ungathanda! Bathumele apha ukuba bafuna inkcazo epheleleyo.
Kwaye ukuba uyi-SNOB, qhubela phambili. Ungazikhathazi ngokunditshisa ngale nto - ndizakuyicima.
tags: unqalintloko osukasnobsImidiya yokuncokola
Imida yemivuzo yeMathematics
Umbono wePhepha awuyi kufa
Ngomhla wama-1 ku-Disemba 2006 ngo-6: 44 AM
UDoug, uxolile ukuba ubuyinyanzele i-carpal tunnel yakho ukuba usixelele ngala madoda mabi kwi-Ajax Planet. Kukho abakhohlisi kwisihlwele ngasinye, ndiyaqikelela. Thandazela 'em. Yiloo nto awayeya kuyenza. Kwaye qhubeka usenza le uyenzayo. Wena kunye nenkuthazo kum!
Ngomhla wama-1 ku-Disemba 2006 ngo-2: 14 PM
Kubonakala kum, baninzi abaxhaphaza ama-wannabe phaya, kwaye bacinga ukuba banokuhlutha kwaye bavuse i-sh *** kuba "abaziwa" kwi-intanethi. Abanye abantu bahla nje ngokuba zi-esile *** s. Indlela endijonga ngayo kukuba banosizi, izidalwa ezinesithukuthezi kwaye abafanelekanga ukuba baphendule okanye bakhathazeke.
Ngomhla wama-1 ku-Disemba 2006 ngo-2: 33 PM
Ngomhla wama-1 ku-Disemba 2006 ngo-6: 13 PM
Khange ndikwazi ukuzibamba ndihleka yimpendulo yakho. Enkosi ngokuthatha ixesha uphume.
Ngomhla wama-1 ku-Disemba 2006 ngo-6: 39 PM
Enkosi kuPat noCJ ngenkxaso!
Ngomhla wama-5 ku-Disemba 2006 ngo-7: 55 PM
Enkosi, Carl! Ilayisensi yeCC yongezwa kumbhalo wephepha elisekwe kwingcebiso yakho.
Ngomhla wama-5 ku-Disemba 2006 ngo-7: 00 PM
Bendizibuza ukuba xa umntu eza kuhamba kule meko inyukayo. Ndizakuboleka ibheji yakho ndiyithumele kwabanye. Ungalibali ke ngoku ilayisensi yeCC 😉
Ngomhla wama-6 ku-Disemba 2006 ngo-3: 39 PM
UDoug sonke siyakuthanda, ngaba sifuna ukubetha iesile, ukuba siyandazisa, ndiza kuzama ukufumana abanye abantu abasenakho. Ndiyakwazi kodwa hayi ixesha elide